ကိုယျ့ ခဈြသူ/ခငျပှနျးကို စနိုကျကြျောခံရတဲ့အခါ . . - Tameelay
ခုခတျေမှာ ပိုငျရှငျရှိမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ စနိုကျကြျောကွတာက အရမျးကို ခတျေစားနတောလေ ပိုငျရှငျရှိမှနျးမသိလို့ဆို တျောသေး ခုက ပိုငျရှငျရှိမှနျးသိသိနဲ့ကို စနိုကျကြျောဖို့ကွိုးစားနကွေတာ တခြို့ဆို မိနျးမကို သိပျကို ဂရုစိုကျပွီး ကွငျနာတဲ့သူတှေ ကိုယျ့ခဈြသူကို သဲသဲလှုပျခဈြကွတဲသူတှကေိုမှ မှတျပဈထား လိုခငျြသတဲ့ (ကောငျးကွသေးရဲ့လား )
ကြှနျမ ဆိုလာပွီးရငျဖှငျ့တဲ့ ကောငျးမလေးတဈယောကျဆို . . .သူ့ခဈြသူကလဲ ခဈြနပေါလကျြ သူကလဲ ခဈြနပေါလကျြနဲ့ အဆငျပွပွေနေခေဲ့ပွီးမှ တခွားတဈယောကျက သူ့ကောငျလေးကို အတငျးလိုကျကပျနလေို့ပါဆိုပွီး ငိုပွီးပွောပွသေးတယျ သူ စနိုကျကြျောခံရမှာ ကွောကျတယျတဲ့ သမီးဘယျလိုလုပျရမလဲ အမရယျ တဲ့
ကိုယျက အခဈြရေးရာမှာ သိပျအကြှမျးကွီးမဟုတျပမေယျ့ ကိုယျသိသလောကျလေး နားလညျသလောကျလေး ပွောပွပေးပါမယျ အဲ့လိုစနိုကျကြျောခံရတော့မယျ့ အခွအေနမြေိုးရောကျလာခဲ့ရငျ . . .
(၁)ကိုယျ့လူဘကျကကော ကငျးရဲ့လား ရှငျးရဲ့လားဆိုတာသခြောလလေ့ာကွညျ့ပါ သူကိုယျတိုငျက ဖောကျပွနျခငျြလို့ဆိုရငျတော့ ဘာမှလုပျမနတေော့နဲ့ သူ့ဘဝနဲ့သူ သူရှေးခယျြတဲ့လမျး သူ လြှောကျပါစပေေါ့ ။ လှမျးစရာမရှိပါဘူး ။
(၂)ကိုယျ့လူက ကငျးနရှေငျးနပေမေယျ့ အားနာတတျလို့တဈဖကျ အခှငျ့ကောငျးယူပွီး အတငျးလိုကျကပျနတေယျ စနိုကျကြျောဖို့တှေးနတေယျဆိုရငျ ကိုယျ့လူကိုယျ ထိနျးဖို့လိုပါတယျ ။
(၃)ဒီအခကျြက အရမျးကို အရေးကွီးပါတယျ ။စနိုကျကြျောခံရတော့မယျ အနအေထားမြိုးရောကျလာတဲ့အခါ ကိုယျ့စိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး ပေါကျကှဲပဈလိုကျလို့မရဘူး အငျမတနျကိုမှ စိတျရှညျရပါတယျ စနိုကျကြျောတဲ့သူကိုလဲ သှားဆဲလို့မရဘူး ကိုယျ့လူကိုယျလဲ ပေါကျကှဲနလေို့မရဘူး အနုနညျးလေးသာ သုံးပါ ။ စနိုကျမရဲ့ မကောငျးကွောငျး ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျဆိုတာ မပွောနဲ့ ကိုယျကိုယျတိုငျ တှနျးပို့ပေးလိုကျသလိုဖွဈနလေိမျ့မယျ စနိုကျမရဲ့ ကောငျးကွောငျးတျောကွောငျး ကိုယျကိုယျတိုငျသဘောကကြွောငျးတှပေဲ ပွောပေးပါ ။
(၄)ပွီးရငျ စနိုကျမ နှုတျက ကိုယျ့မကောငျးကွောငျးးတှမြေားမြား ထှကျလာအောငျလုပျပေးပါ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ သူ့နားကို ရောကျပါတယျ ။ ယောကျြားဆိုတာက နားလညျခကျတာမြိုးလေ သိပျတျောနေ သိပျထကျနတေဲ့မိနျးမကိုကြ သဘောကခြငျြမှ ကတြတျတာ မွငျ့ရာက နိမျ့ရာကို စီးဆငျးတာမြိုးပေါ့ ကိုယျ့ဇာတျနာလေ သူ ကိုယျ့ဘကျ ပွနျလာလပေါပဲ ။
(၅)ကိုယျ့ရဲ့ ဝမျးနညျးမှုလေးတှလေဲ သူမွငျသာပါစေ ။ အတိတျကဘယျလိုပြျောခဲ့တာ ဘယျလောကျကွငျနာခဲ့တာဆိုတဲ့ အမှတျတရတှလေဲ တဈဖနျပွနျပွီး အမှတျရလာပါစေ အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို သူနဲ့အတူရှိပါတယျဆိုတဲ့ အသိလေး ရှိပါစေ ။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယျ့အနားကို သူပွနျရောကျလာအောငျ စှမျးဆောငျကွညျ့ပါ တကယျလို့ပွနျမရောကျလာခဲ့လို့လဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈတှေ မတငျစခေငျြဘူး။
လူဆိုတာ ကံရှိသလောကျပဲ ဆုံရတှရေ့တာလေ
သာယာပြျောရှငျဖှယျကောငျးသော ခဈြခရီးလမျးလေးကို မိနျးမသားတိုငျးပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ ။
ကိုယ့် ချစ်သူ/ခင်ပွန်းကို စနိုက်ကျော်ခံရတဲ့အခါ . .
ခုခေတ်မှာ ပိုင်ရှင်ရှိမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ စနိုက်ကျော်ကြတာက အရမ်းကို ခေတ်စားနေတာလေ ပိုင်ရှင်ရှိမှန်းမသိလို့ ဆို တော်သေး ခုက ပိုင်ရှင်ရှိမှန်းသိသိနဲ့ကို စနိုက်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ တချို့ဆို မိန်းမကို သိပ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ကြင်နာတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ချစ်သူကို သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြတဲသူတွေကိုမှ မှတ်ပစ်ထား လိုချင်သတဲ့ (ကောင်းကြသေးရဲ့လား )
ကျွန်မ ဆိုလာပြီးရင်ဖွင့်တဲ့ ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ဆို . . .သူ့ ချစ်သူကလဲ ချစ်နေပါလျက် သူကလဲ ချစ်နေပါလျက်နဲ့ အဆင်ပြေပြေနေခဲ့ပြီးမှ တခြားတစ်ယောက်က သူ့ ကောင်လေးကို အတင်းလိုက်ကပ်နေလို့ ပါဆိုပြီး ငိုပြီးပြောပြသေးတယ် သူ စနိုက်ကျော်ခံရမှာ ကြောက်တယ်တဲ့ သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အမရယ် တဲ့
ကိုယ်က အချစ်ရေးရာမှာ သိပ်အကျွမ်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်သိသလောက်လေး နားလည်သလောက်လေး ပြောပြပေးပါမယ် အဲ့လိုစနိုက်ကျော်ခံရတော့မယ့် အခြေအနေမျိုးရောက်လာခဲ့ရင် . . .
(၁)ကိုယ့်လူဘက်ကကော ကင်းရဲ့လား ရှင်းရဲ့လားဆိုတာသေချာလေ့လာကြည့်ပါ သူကိုယ်တိုင်က ဖောက်ပြန်ချင်လို့ ဆိုရင်တော့ ဘာမှလုပ်မနေတော့နဲ့ သူ့ ဘ၀နဲ့သူ သူရွေးချယ်တဲ့လမ်း သူ လျှောက်ပါစေပေါ့ ။ လွမ်းစရာမရှိပါဘူး ။
(၂)ကိုယ့်လူက ကင်းနေရှင်းနေပေမယ့် အားနာတတ်လို့ တစ်ဖက် အခွင့်ကောင်းယူပြီး အတင်းလိုက်ကပ်နေတယ် စနိုက်ျကျော်ဖို့့တွေးနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လူကိုယ် ထိန်းဖို့ လိုပါတယ် ။
(၃)ဒီအချက်က အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် ။စနိုက်ကျော်ခံရတော့မယ် အနေအထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်လို့ မရဘူး အင်မတန်ကိုမှ စိတ်ရှည်ရပါတယ် စနိုက်ကျော်တဲ့သူကိုလဲ သွားဆဲလို့ မရဘူး ကိုယ့်လူကိုယ်လဲ ပေါက်ကွဲနေလို့ မရဘူး အနုနည်းလေးသာ သုံးပါ ။ စနိုက်မရဲ့ မကောင်းကြောင်း ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မပြောနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တွန်းပို့ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ် စနိုက်မရဲ့ ကောင်းကြောင်းတော်ကြောင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောကျကြောင်းတွေပဲ ပြောပေးပါ ။
(၄)ပြီးရင် စနိုက်မ နှုတ်က ကိုယ့်မကောင်းကြောင်းးတွေများများ ထွက်လာအောင်လုပ်ပေးပါ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ နားကို ရောက်ပါတယ် ။ ယောက်ျားဆိုတာက နားလည်ခက်တာမျိုးလေ သိပ်တော်နေ သိပ်ထက်နေတဲ့မိန်းမကိုကျ သဘောကျချင်မှ ကျတတ်တာ မြင့်ရာက နိမ့်ရာကို စီးဆင်းတာမျိုးပေါ့ ကိုယ့်ဇာတ်နာလေ သူ ကိုယ့်ဘက် ပြန်လာလေပါပဲ ။
(၅)ကိုယ့်ရဲ့ ၀မ်းနည်းမှုလေးတွေလဲ သူမြင်သာပါစေ ။ အတိတ်ကဘယ်လိုပျော်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြင်နာခဲ့တာဆိုတဲ့ အမှတ်တရတွေလဲ တစ်ဖန်ပြန်ပြီး အမှတ်ရလာပါစေ အချိန်တော်တော်များများကို သူနဲ့အတူရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အသိလေး ရှိပါစေ ။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်အနားကို သူပြန်ရောက်လာအောင် စွမ်းဆောင်ကြည့်ပါ တကယ်လို့ ပြန်မရောက်လာခဲ့လို့ လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တွေ မတင်စေချင်ဘူး။
လူဆိုတာ ကံရှိသလောက်ပဲ ဆုံရတွေ့ရတာလေ
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ချစ်ခရီးလမ်းလေးကို မိန်းမသားတိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ ။
Categories Tameelay Knowledge Tags 03 Post navigation